Sisebenze ngokukhulu ukuzikhandla ukuze sinqobe izimo ebezisendleleni - Bayede News
by nguKwazi Mshengu
UMshengu unguMphathiswa Womnyango Wezemfundo KwaZulu-Natal.
Nakuba bekunezingqinamba, ibikhona inhlansi yethemba lemiphumela emihle ngenxa yokuzinikela obekukhona
Kuyiqiniso elimsulwa nelingephikwe ukuthi unyaka wezi-2020 kube ngonzima kakhulu kubafundi kuwo wonke amazinga namabanga emfundo.
Othisha bethu okuyibo abathweswe ijoka lokucija abafundi bethu nabo badonse kanzima kakhulu kulo nyaka esiphuma kuwo. Ngokunjalo, nabaphathi boMnyango emazingeni ehlukene abasalanga ngaphandle njengoba nabo bezithole bebhekene nengcindezi enkulu yokuqinisekisa ukuthi izikole zonke ziyahlinzekwa ngezidingongqangi ebezidingeka ukuze kwenziwe isiqiniseko sokuthi abafundi bayaphumelela uma kuphela unyaka.
Lobu bunzima engikhuluma ngabo nebesingakaze sibhekane nabo phambilini budalwe ukubheduka kwesifo iCorona esesidume ngokuthi uKhuvethe.
Lesi sifo ukhuvethe engikhuluma ngaso nesisidalele izinkinga ezinkulu ezweni siqale ukusibona esifundeni iHubei edolobheni iWuhan kwelamaShayina kanti kuzothi ngokuhamba kwesikhathi nathi lapha kweleNdlovukazi uMthaniya sizithole sesibhekene ngqo naso. Sithe uma sifika kuleli likaPhunga noMageba salalisa uyaca saphazamisa nazo zonke izinhlaka zempilo kubandakanya nezemfundo.
Abantu bakithi sibabone besishiya emhlabeni ubuthaphuthaphu ngendlela engakaze ibonwe ngaphambilini. Lokhu kube sekuholela ekutheni uHulumeni kazwelonke oholwa nguMengameli wezwe uMnu uCyril Ramaphosa uthathe isinqumo sokulivala thaqa izwe ukuze kuphephiswe impilo yabantu futhi kuliwe nokubhebhetheka kwalesi sifo ebesibhebhethekisa okomlilo wequbula.
Nawo-ke uMnyango wethu okungoWemfundo awusalanga ngaphandle kweminye ebhekane nezingqinamba. Ukuvalwa kwezikole isikhathi eside kuze nezingqinamba eziningi futhi kwasiphoqa ukuthi sijule kakhulu ngokucabanga ukuze sithole izindlela ebesizokwenza ngazo ukuthi abafundi bethu bangalimali kakhulu ngenxa yokungayi esikoleni.
Uma ngibuka imiphumela yethu kaGrade 12 kanye nesibalo sabafundi abaphasile okuyizi-104 985 kubafundi abayizi-135 276 abebebhale izivivinyo zabo zokuphela konyaka ngizizwa ngithobeka kakhulu ngoba kuyacaca ukuthi ukusebenza kanzima kwethu akuphelelanga emoyeni. Uma siqhathaniswa nezinye izifundazwe, thina njengeKwaZulu-Natal besinomthwalo omkhulu kakhulu emahlombe ngoba yithina ebesinabafundi abaningi ukwedlula zonke ezinye izifundazwe.
Yize kuyaye kuthathwe njengento engamukelekile ukuthi usine maqede bese uzishayela ihlombe, kodwa siyafisa ukuthi sithathe leli thuba sizichome uphaphe legwalagwala ngokuthi sibe yisifundazwe esibe nabafundi abaningi kunazo zonke ezinye abaphasile.
Kuyasijabulisa ukuthi yize isimo ebesibhekene naso besikade sinzima ngendlela engachazeki kodwa sikwazile ukusebenza ngokuzikhandla saze sakwazi ukufinyelela kuleli zinga lokuphasa esilitholile njengesifundazwe okungamaphesenti angama-77,6. Leli zinga esifinyelele kulo akulona izinga okulula ukufika kulo uma kade ubhekene nezimo ezinzima njengalezi ebezibhekene nathi.
Angingabazi ukuthi lokhu kungenxa yokuzikhandla kwethu kanye nezindlela ezehlukile zokufundisa kusukela kuthathwe isinqumo sokuthi izikole zizovalwa njengoba izwe belivalwe thaqa.
Kulo nyaka odlule sizithole sethembela kakhulu ekufundeni ngobuxhakaxhaka besimanje lokhu abakubiza nge-Online Education. Siphinde saqinisa kakhulu ekuthengeni izikhala emisakazweni eyahlukene kubandakanya neyomphakathi ukuze sikwazi ukuthumela othisha bethu abanamava ukuthi bafundise izingane emisakazweni.
Lokhu kuthele izithelo ezinhle kakhulu ngoba kuthe noma sezivulwa izikole kwacaca ukuthi izingane zethu azilahlekelwanga kakhulu.
Ukubuyela kwezingane esikoleni ngemuva kwesikhathi eside zingekho futhi zibuyela ngaphansi kwezimo ezihlukile kakhulu nakho kukodwa kuphinde kwaletha ezinye izinselelo kanye nengcindezi ezisebenzini zethu kanye nothisha.
Kube nzima kakhulu ngoba lokhu bese kusho ukuthi sekumele sixhoze omunye umphini, senze imizamo yokuthola imali obekuzomele ukuthi isetshenziswe ukubhekana nezimo ebesingakaze sizilungiselele ngesikhathi senza isabelomali sonyaka.
Sisebenze kanzima sibamba siyeka senza imizamo yokuthola imali yokuthenga izinsiza zokulwa kanye nokuvimbela ukubhebhetheka kwalesi sifo. Sithenge nezinye izinto eziyingxenye yengqalasizinda ebesingazihlelele kodwa obekumqoka ukuthi zibe khona ukuze lesi sifo singayitholi intuba yokuzodlalela ezikoleni zethu.
Sisebenze kanzima sizama ukuhlanganisa imali yokuthi isikole nesikole sibe nezibulalimagciwane. Siphinde senza isiqiniseko sokuthi sihlinzeka othisha nabafundi ngezifonyo kanye nezinye izinto eziningi ebesiphoqeleka ukuthi sizihlinzeke izikole zethu ngokuphazima kweso kubandakanya nokuthumela amathangi amanzi kulezo zikole ebezinenkinga yamanzi.
Ngaphezu kwakho konke lokhu, umsebenzi wokuqinisekisa ukuthi okufundwa emagumbini okufundela kuseqophelweni eliphezulu ubusasihlalele nawo udinga ukuthi sikhiphe amangwevu.
Sisebenze kanzima ngendlela eyisimanga ngaphansi kwezimo ezibucayi. Sihlele uhlelo lokuthi othisha bethu bafundise nangezimpelasonto sizama ukubamba isikhathi esisilahlekele. Siyafisa ukubabonga nabo othisha bethu ngokuzikhandla kwabo. Impela sibonga asiphezi.
Yize abantu abaningi bebelindele ukuthi singenzi kahle kulo nyaka wezi-2020 ngenxa yezingqinamba esibhekane nazo, thina besilokhu sinayo inhlansi yethemba ngenxa yokuzinikela kwethu. Ukuvuna lezi zithelo ezinhle esizivunile kuyasijabulisa, futhi kusinika nomdlandla wokuthi sisebenze kanzima kakhulu kulo nyaka ukuze siqhubeke sibe yisifundazwe esihamba phambili ekuhlinzekeni ngemfundo eseqophelweni eliphezulu. Okuhle ngalo nyaka ukuthi sikwazile ukufunda okuningi ngonyaka owedlule nesicabanga ukuthi kuzosisiza kakhulu ukuqhubeka nokwenza kahle.
Sifisa-ke ukuthatha leli thuba sibongele bonke abafundi bethu abaphumelele kanye nothisha bethu ngokusebenza ngokuzikhandla. Kulabo abangaphumelelanga, sithi akulahlwa mbeleko ngakufelwa. Ithuba lokulungisa amaphutha enzekile lisekhona. Sizoba khona futhi ukubeseka bonke abafundi abangaphumelelanga endleleni yabo yokulungisa imiphumela yabo.
Kuleli qophelo ngifisa ukuphetha ngokuthi ngihlabe ikhwelo kuwo wonke umuntu kanye nazo zonke izinhlaka ezikhona enhla nasezansi lapho kufinyelela khona elaboHlanga ukuthi zibambisane nathi ukuze siqhubeke nokwakha isifundazwe esibeka phambili imfundo ngoba phela siyazi ukuthi imfundo yisona kuphela isikhali esinaso sokulwa nobubha.
nguKwazi Mshengu Feb 26, 2021